သင် LEEDS ၌ရှုပ်ထွေးနေသည့်အခါသင်သိအရာအားလုံး, ဒါပေမယ့်အိမ်မှာလုံးဝအခြေခံကျ - သတင်း
သင် Leeds ၌ရှုပ်ထွေးနေသည့်အခါသင်သိအရာအားလုံး, ဒါပေမယ့်အိမ်မှာလုံးဝအခြေခံကျ
Edgy သည်သင်၏ဂီတအရသာသည် Morrissey ကဲ့သို့အေးမြခြင်းမှသည်သင်၏အဝတ်အစားများဖြစ်သည့်ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်နှင့်သာမာန်မဟုတ်သောအပြင်ဘက်ရှိအရာတစ်ခုခုအထိဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Urban အဘိဓာန်အရ၎င်းကို 'အလွန်အမင်းအေးမြမှုနှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘုံအခြေအနေထက် ကျော်လွန်၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်နေခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်မည်မျှရယ်စရာကောင်းသည်ကိုသတိမမူမိခြင်း' ဟုဖော်ပြသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အဲဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အမှန်တရားနဲ့မဝေးဘူး။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ၀ န်ခံပြီးရှုပ်ထွေးနေသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်အား aux ကြိုးအသုံးပြုခြင်းကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသည့်တေးဂီတကိုလူတိုင်းဝတ်ဆင်နိုင်၊ နားမထောင်နိုင်အောင်အဝတ်အစားများကိုသာကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသည်။ ငါကဒီတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောစစ်တပ်တွင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်သော်လည်းကြီးမားသည့်ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်အမြဲတမ်းစနစ်တကျကိုက်ညီမှုမရှိသောအားကစားဘောင်းဘီတိုများကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်မက်နေကြသည်။ သို့သော်လိဒ်စ်ဝန်းကျင်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောအိမ်သည်ကျွန်ုပ်အိမ်၌အကျွမ်းတဝင်မရှိခဲ့ပါ။
Grimsby တွင် jogger မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ တ်ဆင်သည်
ငါ့အိမ်က Grimsby ပါ။ အဘယ်သူမျှမက Sacha Baron Cohen ကိုအတူဘုရားသခငျသညျ - ကြောက်မက်ဘွယ်ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကရုပ်ရှင်ကအကြံပြုထားသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်ကသူလျှိုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာလား။ ငါမထင်, ကငါတို့အချင်းချင်းဆက်စပ်နေပိုပြီးဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ နာမည်ကအကြံပြုထားသလိုပဲတကယ်ကိုဆိုးဝါးလွန်းတယ်။
လှပသောဤမြို့တွင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်အရာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာရိုးရှင်းသောအပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်စုံ (ပုံမှန်အံဝင်ခွင်ကျ) နှင့်အတူ၎င်း၏နှိမ့်ချသောအဖော်၊ တီရှပ်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဤရှင်သန်နေသောဤမြေတွင်းတွင်းရှိမလိုလားအပ်သောနေထိုင်သူများသည်ကိုက်ညီသောအိတ်များနှင့်အင်္ကျီများနှင့်ချွေးထွက်အင်္ကျီများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ အားလုံးရိုးသားမှုမှာတော့ဒီလူတွေကိုအပြစ်ရှိသူသို့မဟုတ်သူတို့၏အပတ်စဉ်ဆိုင်လုပ်နေထွက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လျှင်သင်မပြောနိုင်ပါ။
သငျသညျပင်ဤမျှလောက်အများကြီးကြီးတွေတစ်ခုခုစဉ်းစားလျှင်, Grimsby မလာကြဘူး။ အမြဲတမ်း
စာသား Grimsby အတွက်မြင်နေရကျိုးနပ်တစ်ခုတည်းသောအရာ
အဆိုပါမြို့ Hipsters နေသောပန်းနှင့် shaker များ၏စွမ်းအင်ကိုချွတ်နထေိုငျ။ လမ်းတိုင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပြသမှုများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အခုတော့ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး, ကြည့်သို့သော်လိဒ်တွင်လည်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်လေးစားမှုတစ်ခုထက်လူသတ်မှုအလိုရှိ၏။ လူတွေကသူတို့လိုချင်တာကိုဝတ်စားဆင်ယင်ပြီးလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တိုတောင်းလှသောအချိန်တွင်သဘောထားကို 'ဂရုစိုက်သူ' ကိုကိုယ်စားပြုသောလူများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့မှာစစ်မှန်သောရှည်လျားသောပင်စင်းအစင်းပါသည့်ကုတ်အင်္ကျီနှင့် Genie ဘောင်းဘီရှည်ကိုအမှန်တကယ်ဝတ်ဆင်ထားသောယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ Grimsby တွင်တွေ့ရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်အများစုသောနေရာများ, မျှတဖို့။
စပျစ်သီးသည်ဟစ်စတာ၏အစားအစာအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစွန်းကိုသင်သာပြုလုပ်သည်။ အချို့က Corduroys တစီးဖြင့်ချော်ထွက်သွားကြပြီးပိုမိုစွန့်စားလိုသည့်အမျိုးအစားများသည် dungarees တရံဖြင့်သူတို့၏ပုံရိပ်ကိုကြည်လင်စေသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရှုပ်ထွေးသောမြို့တော်များ၌သာဤရွှေတွင်းများပါ ၀ င်ပါကသင်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါလမ်းပေါ်တွင်မြုပ်နေနိုင်သည်။ သငျသညျတိတ်ဆိတ်ဆင်ခြေဖုံးမြို့သို့မဟုတ်ရွာ၌တရှာတွေ့ပြီးတော့ယခုအရှုံးမပေးဖို့ကြိုးစားနေလျှင်, သင် Duran Duran Pryzm အတွက်ကစားခံရဖို့လုပ်သလောက်အကြောင်းကိုရရှိပါသည်။ သင်ပြုလုပ်လျှင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဖိတ်ကြားပုံရနိုင်သည်။ သို့သော်အစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူအုပ်စုများသည်သင်ထွက်ခွာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့၏အသံအနိမ့်အမြင့်များဖြင့်စောင့်နေကြသည်။
တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်အစက်အပြောက်များမည်သူမဆိုအတွက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းမှာစပျစ်သီးပြာကမ္ဘာရှိမဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရာများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုကရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို Rothko ပန်းချီကားတစ်ချပ်နှင့်ဆင်တူနေသူကိုသင်တွေ့ပြီဆိုပါစို့။ ထို့နောက်ဘောင်းဘီကိုစစ်ဆေးပါ။ ခြေထောက်တွေကိုလှိမ့်ထားလားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောဆိုင်တွေမှာပဲရှာတွေ့သလား။ အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးဘေးဖယ်ပြက်လုံး, စပျစ်သီးကိုတစ်ခါတစ်ရံမျက်စိရေကိုစျေးကြီးသည်, ဒါကြောင့်သင်ပြီးနောက်သင်ကြည့်ရှုအောင်မြင်ရန်သင်၏ကျောင်းသားချေးငွေအချို့အားရရှိပါသည်သေချာပါစေ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဘောလုံးအားဖြင့်စပျစ်သီးကိုဆုပ်ကိုင်နှင့်သင်၏ရှုပ်ထွေးသောရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်။ သို့သော်သာလိဒ်၌တည်၏။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်သင့်ကိုရှောင်ပါ။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။
အဘယ်သူသည် Justin နှင့်အတူပေါ် Britney cheat လုပ်ခဲ့တယ်
Urban Outfitters သည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အိပ်မက်မက်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထိုအရာတွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ သို့သော်သင်နေထိုင်သောမိုင် ၃၀ ရှိသောစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့နိုင်ပါ။ သူတို့၏အဝတ်များသည်ပုံမှန်ပုံသဏ္breakာန်ကိုချိုး ဖျက်၍ သင့်အားအသက် ၃၀ အရွယ်အဝတ်အထည်များမှရုန်းမထွက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ Topshop / man သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလားတူစက်ရုံတစ်ရုံကိုပေးသည်။ ဒါပေမယ့်စျေးပေါတယ်၊ ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်သင့်တယ်။ ကြောင်းလိဒ်မ Grimsby ၌တည်၏။
သငျသညျ non- ရှုပ်ထွေးသောတည်ထောင်ခြင်း၏ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှလာသောအခါ, ဤဆိုင်များအကြွင်းမဲ့အာဏာ Utopia ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကပိတ်ထားလိုက်သောရှုပ်ထွေးနေသောလူတစ် ဦး အတွက်လတ်ဆတ်သောလေသက်သက်နှင့်တူသည်။ သူတို့၏မျက်လုံးများ borg စီတန်းထားသောအကျီများနှင့်ဘောင်းဘီတိုများကိုဆွဲထားသည်မှာသူတို့အမေကသင့်အားဤသို့ပြောစေခဲ့သည့်အရာကိုအလေးအနက်ထားသည်။ အိမ်တွင်သင်၏တစ်ပြားတစ်ချပ်ကိုစုဆောင်း။ ဤရှုပ်ထွေးလှသည့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်သည်အထိစောင့်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ချေးငွေနှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှုရှိခဲ့လျှင်၊ Urban Outfitters သို့သွားပြီးသင့်ကိုသင်ပြုမူပါကသင်ထိုက်သည်။ အကယ်၍ သင် Domino ၏ပီဇာများများစားစားဝယ်ယူပြီးညငါးနာရီလောက်ပျော်မွေ့ခဲ့လျှင် Topshop ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် Primark? သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကအနည်းငယ်နေဆဲလျှင်, ငါဘဏ္financialာရေးအကြံပေးကိုတွေ့မြင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ် ဦး က Hipsters Emporium
တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းသည်သင်၏မွေးရပ်မြေမြို့တွင်တရားမ ၀ င်ပါ
ငါက 'Edgy person in Leeds' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောရင်ဒီသုံးခုကိုသင်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် - Paisley၊ ပန်းရောင်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဗီနိုင်း / မှတ်တမ်းများ။ Grimsby မှာတော့သိပ်မများဘူး။ ဒီကြည့်ရတာတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်မရှိ၊ မင်းလမ်းထဲမှာကြောင်တောင်တောင်အော်နေလိမ့်မယ်။
သူတို့ထဲကဘယ်သူမှစကားလုံးစတိုင်ကိုတကယ်နားမလည်ကြဘူး၊ ငါသက်သေပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကိုကြင်နာစွာမဆက်ဆံဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါရစ်ချတ် Branson ကျွန်းများ '' ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီ '' ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ကျွန်းများကိုလုပ်ပေးထက်ပိုမိုဗီနိုင်းပိုင်ဆိုင်, ငါအများကြီးသူတို့ကိုကျောနောက်ကျောကစားလျှင်ငါဖြစ်ကောင်း 24 နာရီ rave လုပ်နိုင်ကြောင်းထက်ပို Paisley ထုတ်ကုန်ပိုင်ဆိုင်သည်။
မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏တေးဂီတကိုအသိအမှတ်ပြုသောသူများမှာကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်သုံးဆနှင့်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးသောအရာမှာ 'ကျွန်ုပ်သည် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တာ' ဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သူဂရုစိုက်သနည်း။ David Bowie ၏ရုပ်ပုံ disc ကိုသင်နားထောင်ပြီးသင်၏ရှပ်အင်္ကျီမှာလက်ဖက်ရည်သုတ်ပဝါနှင့်တူသည်ဟုဆိုကြသောဝေဖန်သူများအားသူတို့မနာလိုဖြစ်နေသည်။
သင်၏ညမှထွက်ခွာရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသွားသည်။ သင်၏ Uber ကိုနည်းလမ်းခြောက်ခုဖြင့်ခွဲထုတ်ပါ
Sainsbury ၏အလုပ်သမားများသည်သူတို့၏ယူနီဖောင်းများသည် Beyonce ၏အသစ်အိုင်ဗီပန်းခြံနှင့်တူနေသည်ဟုဆိုနေကြသည်
သီးသန့် - Princeton Open Campus ညွန့်ပေါင်းမှကျောင်းသားများအတွက်စာတစ်စောင်
Ole! - မျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်မှအဓိပ္ပာယ်
ဤမိန်းကလေးသည်ဘုရားကျောင်းမှ ထွက်၍ Forbes ၏ ၃၀ အောက်အောက် ၃၀ စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်
အများဆုံးနှောင့်အယှက် Snapchat ပုံပြင်များ
Coventry IKEA သည်ပိတ်သိမ်းပြီးနောက်လေးထပ်ကြမ်းပြင်နိုက်ကလပ်အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်
အဆိုပါ AcFee ကော်မတီကအလုံအလောက်ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်
ကျွန်ုပ်သည် North Campus တွင် LSA ကျောင်းသူကျောင်းသားအဖြစ်သင်ယူခဲ့ရသည်